जाँदाजाँदै खेम शर्माले भने– विमानस्थल फेरि फोहोर नहोस् – Karnalikhabar
बिहिबार, अशोज ५, २०७४
जाँदाजाँदै खेम शर्माले भने– विमानस्थल फेरि फोहोर नहोस्
मङ्लबार, साउन १७, २०७४ मा प्रकाशित
१७ साउन, काठमाडौं । केही दिनयता त्रिभुवन विमानस्थलका भित्री तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा हेरेर संसारभर रहेका नेपाली मख्ख परिरहेका छन् । नपरुन् पनि किन ? विश्वकै फोहोरीमध्येमा गनिने हाम्रो विमानस्थल अहिले छुँदा पनि दाग लाग्लाजस्तो बनेको छ ।
नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पछिल्लो एक महिनामा आफ्नो हुलिया फेरेको हो । पसिनसक्नु गरी गन्हाउने शौचालय सफा भएका छन्, झ्यालका सिसाहरु टिलिक्क टल्किएका छन् । कार्पेटहरु आजै ल्याएर ओछ्याएजस्ता देखिएका छन् । बल्ल अलिकति विमानस्थलजस्तो भएको छ विमानस्थल ।
एकाएक कसरी आयो यो परिवर्तन ? उत्तर खोज्ने क्रममा हामी ठोक्किन पुग्यौं गैरआवासीय नेपाली खेम शर्मासँग । उनी आफ्नो एक महिने ‘मिसन’ पुरा गरेर सोमबार अष्ट्रेलिया फर्किसकेका छन् ।
फर्किनुअघि एयरपोर्ट अगाडिको एयरपोर्ट होटलमा हाम्रो उनीसँग भलाकुसारी भयो ।
‘मैले कुनै नयाँ काम गरेको होइन,’ कुराकानीको सुरुवातमै उनले भने, ‘भइरहेको कामलाई परिणाममुखी बनाएको मात्र हो ।’
त्रिभुवन विमानस्थल सफाई गर्न उनी कसरी उत्प्रेरित भए त ? यो जान्नुअघि उनको पृष्ठभूमिमा जाउँ ।
३२ वर्षीय शर्माको स्थायी घर चितवनको भरतपुरमा छ । सरसफाइ र सूचना–प्रविधि दुई विधामा संलग्न रहेर उनी १० वर्षदेखि अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन् । ‘सन् २००८ मा आइटी पढ्नलाई अष्ट्रेलिया उडेको,’ उनले सुनाए, ‘उतै सेटल भइयो ।’
अष्ट्रेलिया जानासाथ उनले आइटीको पढाईसँगै काम पनि थालेका थिए । उनले गरेको पहिलो काम नै सरसफाइको थियो । एक जना दाई पर्नेले उनलाई सिड्नी युनिभर्सिटीको सेन्ट एन्ड्रयुज कलेजमा क्लिनिङको काम लगाइदिएका थिए । क्लिनरबाट सुपरभाइजर, त्यसपछि म्यानेजर हुँदै क्लिनिङ कम्पनीको जनरल म्यानेजरसम्म भए ।
यतिञ्जेलमा उनी सरसफाइका विज्ञ नै भइसकेका थिए र उनको जनसम्पर्क पनि राम्रो बनिसकेको थियो । यसैका आधारमा सन् २०१३ मा उनले आफ्नै क्लिनिङ विजनेस स्टार्ट गरे, ‘खेम्स क्लिनिङ’ नाममा ।
पहिले जागिर खाने क्रममा राम्रो जनसम्पर्क बनाएकाले उनलाई आफ्नो कम्पनीलाई स्थापित गर्न गाह्रो परेन । अहिले सिड्नीमा करिव ४० कार्यालयको सफाई जिम्मा उनकै कम्पनीको छ । ५० नेपालीसहित करिब ७० जनाले रोजगारी पाएका छन् । सिड्नीभन्दा बाहिरका शहरमा पनि आफ्नो कम्पनीले काम गरिरहेको शर्मा बताउँछन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल सफा गर्ने सोच
अघिल्लो - माछापुच्छ्रें बैंकको शाखा काउन्टर पुनर्वासको आईबिआरडि, उद्घाटनका दिन गरिव विद्यार्थीलाई बाड्यो झोला
धान रोपेर सकिए लगत्तै चाडपर्व खर्च जुटाउन भारत जानेको लर्को, पुनर्वासको गौरीफण्टा नाकाबाट मात्रै दैनिक १५ सय भारत जाँदै - पछिल्लो
सर्वोच्चले भन्यो- शर्मा अन्य भ्रष्ट्राचार मुद्दाका अभियुक्त सरह होइनन्
अनशन बसेर तर्साउन खोज्ने भन्दै डा.केसीको मागमा एमाले असहमत ..
शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज हुनुपर्छ’ : कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू
Mahankal-5, Chabahil, Kathmandu
9:0 AM - 4:00 PM